musha nyika dzakabatana Singers Taylor Swift Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts
CB inotaura Nhoroondo Yese yeMuAmerican muimbi anonyanya kuzivikanwa nezita rezita rezita “T-Swizzle". Our Taylor Swift Childhood Nhau pamwe Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira panguva yehuduku hwake kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nyaya yehupenyu musati mazita, kumuka mukurumbira nyaya, hukama hwehukama, mhuri yemhuri uye hupenyu hwehupenyu. Kunyanya zvakadaro, zvimwe OFF uye ON-Screen zvishoma zvichakazivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva iye ndeimwe yemabasa makuru mumhanzi anozivikanwa. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Taylor Swift's biography iyo iri inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Taylor Swift Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Taylor Alison Swift akaberekwa musi we 13th waDecember 1989 paRead, muPennsylvania, US Iye ndiye wokutanga wevana vaviri vakaberekerwa naamai vake Andrea Gardner Swift (musha wemudzimai) nababa vake Scott Kingsley Swift (mutengesi).
Nezvemidzi yake nemadzinza, Swift ndudzi yeAmerica yemarudzi akasiyana-siyana neGermany, Shona, Scottish, Welsh, Italian, Irish, Scots-Irish / Northern Irish, French, Dutch, Swedish and Belgian Walloon roots.
Muduku Swift akapedza nguva yakawanda yehuduku hwake ku Reading, Pennsylvania apo akakurira pamwe chete nemunun'una wake Austin vasati vasvika kumhuri yavo vakatamira kune rimwe guta reWill Wyoming.
Kukura kuWyomissing, Swift akatanga kufarira mimhanzi uye aive nevaimbi vemunyika Li Ann Raymes naShania Twain kuti vaone sekurudziro yake uye magamba ehudiki. Kuwedzerwa kune zvido zvaive izwi raSwift rinooneka rakajeka iro raakagara nhaka kubva kune yake opera achiimba mbuya amai, Marjorie Finlay.
Vabereki vaSwift pakutanga vaida kuti iye adzidze tambo dzebhizinesi nemari, Muchokwadi, amai vake vakamutumidza zita rekuti "Taylor" jut kuitira kuti zvigova zvakaoma kumuziva s3x kana zita racho rikaonekwa pakadhi rebhizinesi. Nekudaro, ivo vaive vasina imwe sarudzo kunze kwekukanda huremu hwavo kumashure kwezvaifarirwa nemusikana mudiki mumimhanzi.
Nekuda kweizvozvo, wechidiki blondie akapedza makirasi ezwi kunyangwe asati ave nemakore gumi uye panguva imwe chete, akatanga kuimba pamakwikwi emunharaunda zviitiko nemitambo. Hazvina kutora nguva refu mimhanzi yake yekutanga ichiedza kunyora kumusoro apo paakaimba "Iyo Star-Spangled Banner" paPhiladelphia 10ers basketball mutambo Mugore 76 (pazera ramakore gumi nerimwe).
Akazoita kuti ave nebasa rakakura raidiwa zvikuru nekudzidza kutamba gitare paakanga akwegura 12.
Taylor Swift Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts: Dzidzo neKubata Buildup
Swift aive nedzidzo yake yepuraimari kuAlvernia Montessori Chikoro asati aenderera mberi kuThe Wyndcroft Chikoro. Akazoendeswa kuWyomissing Area Junior / Senior High Chikoro pakatamisirwa mhuri yake kuguta redunhu reWyomissing.
Paaiva kuchikoro chesekondari cheWyomissing, Swift akawedzera kuedza pakutsvaga basa mumimhanzi. Uyu wechidiki aiwanzoenda mauri kuenda kuNashville, Tennessee mushure mekuuya kune imwe nhepfenyuro yekuvandudza mifananidzo yekuita nziyo dzepakutanga pane imwe muRCA Records.
Achibvuma kuzvitsaurira kwake pakuvaka basa mumhanzi, Swift baba vakaona basa rake richibva kuWyomissing kusvika kuNashville ndokugara paHendersonville, Tennessee kuitira kuti vabatsire Kupera muimba yemunyika.
Yaiva Nashville iyo Swift yakasainira purogiramu yeimba yekuchikoro neAaron Academy. Nokudaro, akakwanisa kushanda pakuzadzisa dzidzo yake paanenge achitora chikamu chekuita mukukanda uye kumakonti.
Taylor Swift Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts: Simuka Mukurumbira
Nyika mimhanzi guta guru reNashville yaive nyika nyowani yeSwift uyo akashanda nevanyori vanyori vane ruzivo kudzamara kuita kwake paNashville's Bluebird Cafe showcase yakabata pfungwa dzeBig Machine Records Executive, Scott Borchetta.
Scott akasaina Swift kune achangotanga Big Machine Records muna 2005 mushure maizvozvo akaburitsa dambarefu rake rakanzi 'Taylor Swift' muna Gumiguru 2006.
Iyo album yakanga ine zvinyorwa zvakadai se'Tim McGraw 'inotora nhamba ye5 nzvimbo yeU.B. bhiribhoti kwevhiki dzinopfuura 157 uye inotengeswa pamakopi emamiriyoni e7.75 munyika yose.
Taylor Swift Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Kurumidza kuwanikwa kuroora. Tinokuendesa iwe hukuru hwemashoko pamusoro pehukama hwake hwekare uye huripo. Chokutanga chaiva nemwedzi mitatu yerudo rwekuda nemutambi / muimbi Joe Jonas weThe Jonas Brothers mu2008.
Akazotevera kudanana stints akaona iye zuva remutambi Taylor Lautner, Singer John Mayer, Jake Gyllenhaal, mwanakomana waRobert Kennedy - Conor Kennedy, muimbi weBritish / mutambi Harry Styles, DJ / muimbi - Calvin Harris pamwe nemutambi Tom Hiddleston.
Swift akashandisa akawanda ekurambana kwake sekurudziro yenziyo. Muchokwadi, iyo "Yekupedzisira Nguva" kubva kune yake album tsvuku inopa nzwisiso murudo rwake naJake Gyllenhaal. Muchiedza chimwe chete, "Ndakaziva Kuti Unetseka" uye "Kunze Kwematanda" nziyo pamusoro paHarry Styles kubva kumaalbum "Red" uye "1989" zvichiteerana.
Muimbi wenyika pari zvino ari kufambidzana nemutambi Joe Alwyn. Shiri dzerudo dzakasangana pagala ra2016 uye dzakaramba dzakabatana kubvira ipapo. Hukama hwavo hwakafuridzira zvisingaite nziyo "Ready For It?", "End Game" uye "Gorgeous" kubva kuAlbum "Mbiri".
Taylor Swift Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
Nhanho yakaberekerwa mumhuri ye5 tinokuudza mashoko echokwadi nezvemhuri yemhuri yake iri kusanganisira vanasekuru navanasekuru vake.
Nezve vanasekuru navanasekuru vaSwift: Vanasekuru vaamai vaSwift ndiMarjorie Moehlenkamp-Finlay naRobert Bruce.
Marjorie Moehlenkamp-Finlay aive Swift's doppelganger, muimbi we opera, muenzi weTv uye zvakanyanya kukosha, mukadzi akafuridzira Swift kuita basa rekuimba. Nehurombo, akafa makore matatu pamberi pekusimuka kwemuzukuru wake mukurumbira (2003) aine makore makumi manomwe nemana.
Kune rimwe divi ndisekuru vaamai vaSwift, Robert Bruce Finlay. Robert aive wenguva imwe chete United States Mauto mukuru aigara mhuri yake kusvika parufu rwake muna 2003 aine makore makumi masere nemasere.
Nezve vanasekuru navanasekuru vaSwift: Chinyanyo kuzivikanwa nezve vanasekuru vababa vaSwift vanosanganisira Rose Baldi Swift na Archie Dean Swift, Jr.
Taylor Swift vanasekuru nasekuru.
Nezve amai vaSwift: Amai vaSwift Andrea Gardner Swift akazvarwa musi wa10 Ndira 1958. Aive kamwe-kamwe wekushambadzira maneja iye zvino anoshanda semugadziri wemba.
Kunze kwekuva amai, Andrea anonyorera Swift uyewo nhamba yake imwe fan.
Nezve baba vaSwift: Scott Kingsley Swift, akaberekwa musi we5th waMarch 1952 anofambira baba. Mutungamiri wezvemari ndiye mutatu wedzinza remabhanki. Akaonekwa kuti ane kenza mu 2007 asi ave achitarisira chirwere chinouraya kubvira ipapo.
Nezve Swift's Siblings: Kurumidza kune imwe hama inonzi Austin. Austin, akaberekwa musi wa XNUMt zuva raMarch 11 makore 1992 adiki kupfuura anokurumidza uye anowedzera ukama hwepedyo naye. Mumwe akadzidza kubva kuYunivhesiti yeName Dame anoshanda semufananidzo wemuzvipfeko uye ane zvaanoda mune indasitiri yevaraidzo.
Taylor Swift Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts: Untold Career Facts
Guinness Bhuku reRekodi rave richiziva kuti rinokurumidza risina zvishoma pane nguva 4. Kuzivikanwa kwakabva pane zvakatengesa kutengesa mavhidhiyo ejedijiti kusvika kutsvaga kutengesa kwema digital singles.
Nhanho yakakunda pasina zvishoma kune mihoro ye 275 uye yakasarudzwa 572 nguva. 10 kunze kwekukudza kwe 275 ndiyo maGrmmy mubayiro apo 8 ndiyo Chikoro che Country Music chikomborero.
Kunze kwekuimba, Swift ane ruzivo paTV. Ivo vanosanganisira basa rake semukomana anopandukira muchikamu cheCSI, kutaridzika muchikamu cheThe New Girl mu2013 pamwe nekukweretesa izwi rake kumunhu Audrey mu "The Lorax".
Nekufungidzirwa kwemari inofanirwa mari ye $ 320 mamiriyoni (sekuna 2018), Swift ane mari yakanaka uye yakambove yakarongedzwa neForbes Magazine se nhamba yepamusoro pane yakarongwa yakanyanya kubhadharwa pasi pe30.
Taylor Swift Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts: Personal Life Facts
Hupenyu rwiyo rwe Swift uyo kurudziro inouya nenzira dzakasiyana kusanganisira kubva kungofunga nezve hupenyu. Kuwedzeredzwa kuSwift kwakasiyana masosi ekurudziro kugona kwake kwepamusoro kwekufungidzira kunoonekwa nekuverenga akawanda mabhuku uye nhetembo.
Nziyo dzenyika dzinoita chimiro chimwe chete, chinorumbidzwa kune vana vanofuridzirwa kugamuchira simba rekuverenga nokunyora sezvaanoramba achireva bhuku re 350-peji raakanyora panguva ye 12.
Kukwanisa kucherechedza kuti Swift ndomumwe wevatambi vashomanana vanozununguka kusvika kumusoro kwemakambani emimhanzi asi vachiri kuchengeta tsoka dzavo pasi. Nzira dzake dzinofadza dzinosanganisira kupa rubatsiro kune dutu reAmerica uye vakapukunyuka mafashamo pamwe nezvakaitika kwaari ne Make-A-Wish Foundation.
Kunyange zvazvo muimbi we1989 ave nechikonzero chekubatanidzwa mune zvehutano hwemapurisa Katy Perry uye Kanye West, akabudirira kugadzirisa zvose uye anoramba achichinja nyika mimhanzi.
Taylor Swift Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts: Lifestyle
Anomhanya akawana musha kubva kumhenderekedzo yegungwa kubva panguva yaakasiya imba yake yehuduku mu Reading, Pennsylvania. Iyo yakawanda kupfuura yose yeimba yake ndiyo $ 17 Million Rhode Island Mansion yaakatora makore mashomanana kumashure.
Her Cars Cars inosanganisira Mercedes Benz Viano, Porsche 911 Turbo, Chevy Silverado, Audi R8, pakati pemamwe magungwa angave angangodaro akafuridzirwa kubva.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Taylor Swift Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!